Bala i-Payment Payment kwiNgxowa-mboleko elula
Iintlawulo zerhafu zenzalo elula
Unokwenza iintlawulo ezincinci kwimali-mboleko elula ukugcina imali ngaphambi kokuba umboleko ufanele. Glow Izithombe, Inc, i-Getty Izithombe
Unokuzibuza ukuba ungabala njani inkokhelo encinci kwimali-mboleko elula kwaye ukuba, ngokwenene, kulungile ukuhlawula inkokhelo emalini-mboleko. Okokuqala, khangela ngebhanki yakho malunga nemithetho. Ziyakwazi ukuhluka ngokuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo okanye kunye nomnini-mboleko. Ngokuqhelekileyo, intlawulo yesibambiso iya kubhatalwa ngomhla wokukhula kwemboleko. Nangona kunjalo, ababolekayo banokufisa ukugcina inzala ethile kwaye benze enye imali okanye enye inxalenye yentlawulo phambi komhla wokukhula xa umboleko ufika. Ngokuqhelekileyo, oko kwenzeka njalo, inkokhelo yokubolekwa ngokukodwa isetyenziselwa inzala eqokelelwayo. KUNYE, intsalela yentlawulo ekhethekileyo isetyenziswe kwinqununu yomboleko. Oku kuthethwa ngokuba ngu-Rule wase-US othi: nayiphi na intlawulo yentlawulo ekhethiweyo kuqala ihlanganisa yonke inzala eye yaqokelela. Intsalela yenkokhelo encinci inciphisa inqununu yemboleko. Yingakho kubaluleke kakhulu ukukhangela imithetho kunye nomboleki wakho. Kwiimeko ezininzi, kukho umthetho onqabela umboleki-mali ukuba ahlawule inzala kumdla.
Ngaphambi kokukunika amanyathelo okubala iintlawulo zeengxenye kunye nokuqonda ukugcinwa, kubalulekile ukuqonda amagama ambalwa:
1. Iinqununu eziLungisiweyo: le yinqununu ehlala emva kokuba inkokhelo (parti) ekhethekileyo isetyenziswe kwimboleko.
2. Ukulinganiswa kweBhalansi: Le mali ibalwayo ngenxa yokuzalwa emva kokuhlawulwa kwentlawulo (parti).
Indlela yokubala Intlawulo ekhethekileyo kwiNgxowa-mali yesiQhelo
I ntlawulo. D. Russell
Isinyathelo sokubala iRhafu yeNtlawulo
1. Fumana ixesha elichanekileyo ukusuka ngomhla wokubolekwa kwemali yokuqala kwinkokhelo yokuqala.
2. Bala i-interest interest from the exact time of loan to first payment payment.
3. Ukukhupha umtsalane wenzala ye-dollar kwisiteyathelo sangaphambili ukusuka kwintlawulo yentlawulo.
4. Phonsa intsalela yentlawulo ekhethiweyo ukusuka kwinqanaba elingentla ngenani lemvelaphi yinqununu eliza kukunika inqununu ehlengahlengisiweyo.
5. Phinda le nkqubo nayiphi na enye intlawulo yentlawulo. 6. Xa ukhula, uya kubala umdla ukusuka kwintlawulo yokugqibela ekhethiweyo. Yongeza lo mdla kwinqununu yakho ehlengahlengisiweyo ukusuka kwintlawulo yokugqibela yentlawulo. Oku kukunikezela ngemali ebhalisiweyo efunekayo ngosuku lwakho lokukhula.
Ngoku umzekelo wobomi bokwenene:
I-Deb ikhokhelwe i-$ 8000. kwi-5% kwiintsuku ezingama-180. Ngomhla we-90, uya kuhlawula i-$ 2500. Umzekelo 1 ubonisa ukuba kubalwa ukufika kwibhalansi elungelelweyo ngenxa yosuku lokukhula.
Umzekelo wesi-2 Ubonisa ukuba kubalwe umdla osindisiweyo ngokwenza inkokhelo encinane. (jonga ngokulandelayo)
Unokufumana le nqaku ngokubala inani elichanekileyo leentsuku zokuboleka imali .
Inzala Egcinwe Ngokwenza Intlawulo Ekhethekileyo (Umzekelo 2)
Emva kokugqiba uMzekelo 1 ukuchonga ibhalansi echitshiweyo ngenxa yokukhula kumboleko we $ 8000. kwi-5% kwiintsuku eziyi-180, ngomhla we-90, ukuhlawula okuyingxenye ye-$ 2500. Eli nyathelo libonisa indlela yokubala umdla ogcinwe.
Abaphumeleleyo beMasters abuyele emuva (kwaye Yintoni eyenzekayo eya kwiNombolo 3)
UbuGcisa boMerika kunye neCraft Books zezobugcisa
Ifoto yokuTyelelwa kweProgram yeMadoda Pro Forehand Grips
Yiyiphi iInjini-Burn Engine?
Iintlanzi kunye neZilwanyana zaseJamani
Iimpawu eziphambili zeMacavavelli
Ukwahlula njani i-Lobster yamaBhinqa evela kwi-Lobster yowesifazane?
U-Lee v. Weisman (1992) - Imithandazo eSikolweni